8 Bogagga Shabakadaha si loo abuuro astaamo, u sameyso astaantaada BILAASH | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | logos, dhowr
Waxaad rabtaa abuuri astaamo bilaash ah? Mawduucyo kooban ayaa ka jira bulshada naqshadeeye oo sababa xiisad ka badan mowduuca ku xadgudubka shaqada. Dhinaca naqshadeynta shirkadaha iyo astaamaha, waxaa jira tiro badan oo qalab ah oo maanta isku dayaya inay beddelaan shaxanka naqshadeeyaha caadiga ah. Waddooyinku aad ayey u ballaaran yihiin: Laga bilaabo adeegyada nashqadeynta astaanta iyo kharashyo dawakh ah oo u dhexeeya 5 ilaa 10 euro halkii astaan ​​nidaamka bilaashka ah ee khadka tooska ah iyo codsiyada isku dayaya inay otomatig u sameeyaan qaabeynta astaamo bilaash ah iyada oo loo marayo xalal horay loo dejiyay oo laga soo saaray bangi ballaaran oo logos ah. Waa maxay ra'yigeyga shaqsiyeed? Xaqiiqdii waxay la mid tahay tan naqshadeeye kasta oo muuqaal ah. Codsiyadaan iyo qalabkani waa hab lagu dhiirrigeliyo fikrad khaldan oo aad uga fog xaqiiqda: Shaqada naqshadeeye garaafku waa wax farsamo iyo kharash badan oo lagu dabooli karo iyada oo loo marayo xalalka tayada hoose iyo saxda ah.
Haddii aad raadineyso samee astaantaada natiijo adag, wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan meherad meel ah oo aad isku dayeyso inaad hesho lopotype ah oo si fiican ugu habboon baahiyaha mashruucaaga, aan kuu sheego in noocyada noocan oo kale ah aysan sinnaba u ahayn bedelka ugu wanaagsan ee aad heli karto. Markaa haddii aad tahay qof leh mashruuc adag iyo meel dhex dhexaad ah oo suuqaaga dhexdiisa ah, waxaa fiican inaad iska indhatirto dhammaan waxyaalahan kale
Si kastaba ha noqotee, waa inaannaan noqonin kuwa xagjir ah oo xad dhaaf ah mana iska indho tiri karno qaar ka mid ah faa'iidooyinka noocyadan kala duwan ay bixiyaan abuuri astaamo bilaash ah. Sababtoo ah runtii, maahan in dhammaan mashaariicdu ay isku cabir yihiin, dhammaantood isku baahi ma aha ama isku isku mid ma aha ee isbeddellada iyo biseylka Waxaa jira waqtiyo ay caadi noqon karto in la isticmaalo noocyada aaladaha astaamaha astaamaha. Hoos waxaan ku soo jeedinayaa kiisaska qaarkood:
1 Waxaad hadda bilowday bog kuu gaar ah
2 Waxaad tahay arday naqshadeysan oo aad rabto inaad aragto beddelaadyo kala duwan oo astaan ​​ah
3 Waxaad tahay naqshadeeye xirfadle ah waxaadna ubaahantahay qosol madow
4 Qalabka khadka tooska ah ee loogu talagalay in lagu abuuro astaamo bilaash ah
4.3 Qoraal qabow
4.4 Generator Logo
4.5 Hipster Logo Generator, sameyso astaantaada
4.6 Logaster, naqshad astaan ​​bilaash ah
4.7 Qoraalka ololaya, astaamaha YouTube
4.8 Logo Haa
4.9 Abuur Logo Bilaash ah
4.10 Naqshadeynta Mantic
4.11 Adeegyada Logo Bilaash ah
4.12 Abuure Logo GraphicSprings
4.14 Astaanta fudud
4.15 Shabakadda Warshadaha Logo
4.16 Astaanta beerta
4.17 Astaanta sawirka
4.18 Samee Logo Khadka Tooska ah
4.19 Isbarbar dhig
4.20 Farsamaynta qoraalka
Waxaad hadda bilowday bog kuu gaar ah
Waxaad ku soo gelaysaa adduunka abuuritaanka waxyaabaha jira waana markii ugu horreysay ee aad bilowdo mashruuc noocan ah. Ma lihid ilihii lagama maarmaanka u ahaa inaad wajahdo shaqaalaynta nashqadeeyaha, wax aad u yar ma lihid aqoonta lagama maarmaanka u ah sameynta astaantaada. Waxaad ka bilawday xoq iyo ma waxaad dooneysaa inaad hesho astaan Taasi waxay si ballaaran u qeexaysaa isbeddelka khadkaaga tifaftirka uu raaci doono. Xaaladahaas oo kale, adigu waad isticmaali kartaa qalabkan adigu si aad u hesho xalka adiga kugu habboon.
Waxaad tahay arday naqshadeysan oo aad rabto inaad aragto beddelaadyo kala duwan oo astaan ​​ah
Aaladda noocan ah waxay leedahay dhinac wanaagsan waana inay bixiyaan (ama badanaa bixiyaan) bangiyo waawayn oo tusaale u ah horumarka astaamaha "hiwaayadda". Xidhiidhka ugu horeeya waxa kugu fiicnaan kara inaad soo booqato oo aad barato istaraatiijiyadaha kaladuwan ee kaladuwan ee lagu adeegsan karo astaanta. Iskusoo wada duuboo, waxaa lagugula talinayaa (laga yaabee intaas in kabadan) inaad abuurto ururo kuu gaar ah oo astaamo soo jiidan kara dareenkaaga, sababtoo ah qaabkan waxaad ku baran kartaa inaad hesho qaabkaaga oo aad kaheli kartid qaab dhismeedka qaabdhismeedka iyo garaafka ee kuxiran habka aad u fahamto bilicsanaanta .
Waxaad tahay naqshadeeye xirfadle ah waxaadna ubaahantahay qosol madow
Si fiican ayaan u fahmay. Waxaa jira waqtiyo markii shaqadu tahay mid kacsan, culeys, daal badan oo aakhirka qaadanaya iyaga oo laga yaabo inaad aad ujeceshahay nooca madow ee majaajillada ah sida aan ahay. Boggan shabakadda ee aan maanta kuu soo bandhigeyno waxay leeyihiin dhimbiil kugu filan si ay kaaga helaan wax ka badan qosol haddii aad tahay naqshadeeye ku adkaaday kun dagaal: Waa la ballan qaaday.
Laga soo bilaabo geeskayaga, waxaan dooneynaa inaan kor u qaadno sawir u qalma naqshadeeyaha garaafka inuu yahay xirfadle iyo dabcan sharad ku saabsan qiimaha shaqadan cajiibka ah ay leedahay heerarka oo dhan. Taasi waa sababta ay aad muhiim u tahay inaan ogaano sida loo helo meesha saxda ah ee qalab kasta oo aan ka helno nafteena markii aan bilownay tababar fudud ilaa aan ka noqonay xirfadlayaal ixtiraam leh. Dhamaanteen ka mid ah bulshadaan waxaan ka warqabnaa in naqshadeynta garaafka ay ka sareyso dhamaan qaab isgaarsiineed oo ahmiyad gaar ah siineysa bilicsanaanta iyo hufnaanta Si fudud annaga oo ka bilaabayna macnaha iyo saamaynta erayga isgaadhsiin, waxaan iska tuuri karnaa dhammaan halista qalabkan maadaama isgaarsiintu ay lama huraan u baahan tahay laba geesood iyo jawaab celin, wax aaladda makaanikada iyo otomaatigaba aysan bixin. Halkan ma jiraan wax laba geesood ah, halkan waxaan uga hadleynaa warbaahin dhexdhexaad ah waxaanna ka guureynaa dhulka naqshadeynta muuqaalka ah si aan ugu tagno bangiga xalalka hiwaayadda.
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa 20 beddelaad gebi ahaanba bilaash ah si loo helo astaamo deg deg ah oo shakhsi ahaaneed. Sida iska cad, halkan kama samayn doonno nooc kasta oo dhiirrigelin ah bogagga internetka ee bixiya adeegyo qiimo sare leh ee noocan ah shaqada. Iyaga ku raaxee!
Qalabka khadka tooska ah ee loogu talagalay in lagu abuuro astaamo bilaash ah
Sidaan soo sheegay, internetka waxaa jira qalab fara badan oo lagu abuuri karo astaamo bilaash ah laakiin halkan waxaan ku tusi doonaa sida ugu fiican ee aan soo helnay. Dabcan, haddii aad tahay youtuber sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa inaad abuurto kanaga astaamaha YouTube.
Logogratis wuxuu leeyahay tifaftire fudud oo khadka tooska ah oo noo oggolaan doona inaan isku qasno qoraalka, sawirada, midabada iyo qaar ka mid ah saameynta horay loo sii dejiyay si awood loogu yeesho sameynta astaan ​​qaab fudud iyo waqti gaaban
Kaliya waxay kaa codsaneysaa inaad qorto qoraal waxayna si toos ah u soo saartaa tiro badan oo xulashooyin ah oo aad si toos ah ula soo bixi karto. Waxaad ka heli kartaa shabakadda halkan.
Abuuritaanka astaamaha ka sokow, degelkan waxaad ka heli kartaa in ka badan 1.900 nooc oo qoraal ah oo aad bilaash uga dejisan karto kombiyuutarkaaga.
Mid ka mid ah kuwa ugu faca weyn meesha laakiin waligiis qaab kuma baxo. Boggan waxaad ka heli kartaa in ka badan 100.000 astaamo si aad u soo dejiso, markaa waxaad u haysataa dhammaan dhadhanka iyo midabada. Halkan ka gal boggaaga.
Hipster Logo Generator, sameyso astaantaada
Tifatiraha kale ee xiisaha leh ee khadka tooska ah halkaasoo aad ku isticmaali karto sawirro, qoraallo iyo midabbo si aad ugu sameysato astaan ​​daqiiqado gudahood iyo natiijo wanaagsan oo kama dambays ah. Waxaad ka heli kartaa xiriiriyahan.
Logaster, naqshad astaan ​​bilaash ah
Qalabaynta waa koronto-dhaliye calaamadeysan oo kuu oggolaanaya inaad ku abuurto astaan ​​tayo leh daqiiqado yar oo bilaash ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad gasho magaca shirkadaada oo aad doorato nooca ganacsiga. Waxay la shaqeysaa dhammaan qaababka waaweyn (PNG, PDF, SVG, JPEG) iyo waliba cabirro badan. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo noocyada astaamaha bulshada (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus) ama sameyso kaararka ganacsiga, baqshadaha, iwm.
Qoraalka ololaya, astaamaha YouTube
Marka lagu daro in laguu ogolaado inaad sameyso astaan, sidoo kale waa soo saare magac aad u faa'iido badan oo awood u leh inuu magacaabo mashruucaaga iyo / ama boggaaga. Waxay si fiican ugu shaqeysaa Ingiriisiga sidaa darteed wuxuu ku ansaxayaa oo keliya mashaariicda caalamiga ah ama luqaddaas. Ka hel bogga adeegga halkan.
LogoYes waxaad ku sameyn kartaa astaan ​​daqiiqado ah oo ka bilaabaneysa kumanaan jees jees ah oo ay u abaabuleen qaybo.
Abuur Logo Bilaash ah
Abuur Logo bilaash ah khadka tooska ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si bilaash ah u sameysatid astaamo 4 talaabo oo fudud oo aad ku soo dejiso si xallin sare leh. Sababtoo ah nidaamkeeda dareenka iyo xawaaraha, waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan in si dhakhso leh loo eego noocaaga.
Waa aalad khadka tooska ah laga helo oo waxay leedahay xulashooyin habeyn badan oo kuu oggolaanaya inaad saameyn ku yeelato doorsoomayaal badan Booqo bogga halkan.
FreeLogoServices waa aalad khadka tooska ah oo bilaash ah oo leh dhowr qaybood oo astaamaha kaladuwan lagu kala saaro. Beddelkaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku horumariso astaan ​​bilaash ah dhowr daqiiqo gudahood. Waxay sidoo kale ku siin doontaa suurtagalnimada inaad ku qaabeyso kaarkaaga ganacsiga iyadoo lagu saleynayo astaanta aad sameysay, ama inaad u adeegsanayso inaad ku daabacdo funaanado ama waxyaabo kale.
Abuure Logo GraphicSprings
GraphicSprings ayaa laga yaabaa inay tahay aaladda ugu awoodda badan kuwa halkan lagu soo bandhigay, maaddaama xulashooyinka qaabeynta ay yihiin kuwo aad u badan. In kasta oo ay wali ka fog tahay inuu ahaado qalab naqshadeeye, waxay ku dhowdahay inuu mid noqdo. Ikhtiyaar ahaan dhammaystir ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad xirfadle ka kireysato kooxdaada si aad u horumariso astaanta aad raadineyso, midkani wuxuu noqon doonaa xirfadle. Waxay u oggolaaneysaa xulashada shaandhada iyadoo kuxiran nooca ganacsiga ama mashruuca aad ugu baahan tahay astaan ​​cusub.
LogoCraft waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka shaqeyso bangigeeda astaamaha oo aad ku dari karto qoraalka iyo saameynta nooc kasta. Marka astaantaadu dhamaato waad keydin kartaa ama aad kala soo bixi kartaa si loogu isticmaalo mustaqbalka. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad gasho astaamo horay loo abuuray si aad awood ugu yeelatid inaad si habsami leh ugu fududeyso. Waxay sidoo kale leeyihiin adeeg naqshadeyn calaamadeyn ah oo ka bilaabanaya $ 49.
LogoEase waa codsi toos ah oo aad ku abuuri karto oo aad ku qaabeyn karto astaantaada bilaash daqiiqado gudahood. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay kaloo leedahay dhowr hagayaal adeegsadeyaal fiidiyoow ah, si aad uga faa'iideysan karto dhammaan howlaheeda si fudud oo dhakhso leh.
Shabakadda Warshadaha Logo
LogoFactory ikhtiyaarkan mar kale xoogaa wuu ka aasaasi yar yahay, laakiin horumarinta xalalka fudud iyo astaamaha bilowga ah waxay noqon kartaa wax ku ool ah. Sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash sidoo kale uma baahna nooc kasta oo diiwaangelin ama nidaam xulasho ah si ay u awoodaan inay adeegsadaan.
Logo Garden waa aalad si caddaalad ah wax ku ool ah oo si fudud loo isticmaali karo. Waxay bixisaa astaamo quruxsan oo nadiif ah oo u muuqda qaab gebi ahaanba bilaash ah oo dhakhso leh.
Logo Snap wuxuu u baahan yahay diiwaangelin. Qalabkan waxaad ku abuuri kartaa astaan ​​qaab fudud waxaadna sii wadi kartaa inaad wax ka bedesho ama aad u isticmaasho hadhow, inkasta oo ay tahay inaad marka hore gasho.
Waxaad ku isticmaali kartaa arjiga khadka tooska ah ee Calaamadeynta Calaamadaha Khadka tooska ah bilaash si dhakhso leh Uma baahnid inaad isdiiwaangeliso waxaadna awoodi doontaa inaad ku keydiso natiijada ugu dambeysa ee astaamahaaga qaabka PNG.
Supalogo waa mid ka mid ah codsiyada ugu da'da weyn ee khadka tooska ah looga abuuro astaamo bilaash welina way shaqeyneysaa. Iyada oo loo marayo waxaad ku abuuri kartaa oo ku soo dejisan kartaa astaamaha si aad u dhakhso badan oo fudud. Adiga ayaa qoraya qoraalka ama magaca astaanta, xulashada xulashadaada oo soo deji natiijada ugu dambeysa.
Haddii aad taageere u tahay ciyaarta la mahadiyey ee Minecraft, hadda TextCraft waxaad ku abuuri kartaa cinwaanno iyo astaamo qaab ciyaareedka fiidiyowga, taas oo ah, 8 jajab. Nidaamku waa mid aad u fudud oo bilaash ah.
Haddii aad galeyso adduunyada naqshadeynta garaafka ama aad tahay naqshadeeye celcelis ahaan, Youidraw waa aalad sawir oo u shaqeysa sida xalka qaabeynta qadka tooska ah ee internetka. Suurtagalnimada inaad la shaqeysid vectors-ka jawi kala duwan, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu muujiso qaabkaaga iyo hal-abuurka astaamahaaga. Waxay leedahay labadaba nooc bilaash ah iyo nooc caymis ah oo ay ku jiraan kordhin.
Ma taqaan bogag badan oo aad karaysid abuuri astaamo bilaash ah? Noo sheeg ilaha aad isticmaaleyso marka aad qaabeynayso astaamo ama aqoonsi si deg deg ah oo fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Abuur astaamo bilaash ah
Ma ii abuuri kartaa astaan ​​aniga, fadlan, waa magaca gabadheyda iyo wiilkeyga, waxaan sameynaa dharka isboortiga
sida loo isticmaalo qalabkan
Ku jawaab desan
Waxaan raadinayaa lammaane dijo
Naqshadeynta maahan waxkeyga sidaa darteed waxaan raadinayaa koronto-dhaliye astaan ​​si uu ii caawiyo, tan ugu dhameystiran waxaan helay Calaamadaha Bilaashka ah.
Waan ogahay in boostada aysan aheyn wax cusub, si kastaba ha noqotee waad dib u eegi kartaa maxaa yeelay kalabar xiriiriyeyaasha ma sii shaqeeyaan.
Jawaab raadinta lammaane
Naagtaada duugga ah dijo
Waxay u adeegtaa;)
U jawaab naagtaada duugga ah adoo ku jira
Waa salaaman tahay, ma ii soo diri kartaa xiriiriye si aan u sameeyo astaan? mahadsan sugaya jawaab ...
Ku jawaab martinuec
by Taleex Wacaan dijo
Waxaan si kama 'ah u sameeyay astaan ​​leh bog lacag leh waana inaan bixiyaa 29 doolar, wax ma dhacaan haddii aanan sameyn?
Ku jawaab byMaTrix
Aad baad ugu mahadsantahay liiska boggaga internetka, markii aad tafatiri karto bogga koowaad, maadaama aan la heli karin, sida muuqata domainka wuu dhacay :(
Waad ku mahadsantahay digniinta, waxaan horeyba uga saarnay iskuxirka koowaad.
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Astaan ​​loogu talagalay bogga, gaar ahaan haddii ay metelayso shirkad, waa mid aad muhiim u ah aaladahaan ayaa shaqada ka dhigaya mid aad u fudud.
caato ah dijo
cariirigaas ... taasi waxay cay ku tahay naqshadeeyayaasha ... waana bilaash
Waan ku taageersanahay ... a «waali» ... laakiin haddii aad rabto inaad ku degto wax si liidata loo qaabeeyey oo aan asal ahaan asal ahayn had iyo jeer waxaa jira xulashooyinkan ... nasiib darro
Waa salaaman tahay Lizbeth. Waan ku farxi lahaa inaan ku caawiyo.
Ku jawaab hugonarvaja
astaamaha shirkadaha dijo
Astaamaha ayaa muhiimad muhiim ah leh, maadaama ay yihiin wejiga muuqda ee shirkadda, sababtaas darteed waa inaad aad uga taxaddartaa qaabeynta, boostada oo aad u wanaagsan.
Ka jawaab calaamadaha shirkadda
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawisaan inaan sameeyo astaan ​​loo sameeyo ololaha xildhibaanka jecel isboortiga
Astaantu waa shay, astaan ​​ama astaan ​​muuqaal ah oo loogu talagalay in loogu adeego astaan ​​shirkadeed, sidaa darteed mid ka mid ah wanaagyada ugu waawayn ee astaantu leedahay waa shakhsiyan iyo gaar ahaaneed si looga fogaado jahwareerka suuqa ka dhex jira macaamiisheenna mustaqbalka.
Soo iibso Logo dijo
Macluumaad wanaagsan, laakiin feker ahaanteyda astaan ​​aad ayey muhiim ugu tahay sida muuqaalka shirkadeed shirkad waxaanan u maleynayaa in gacanta naqshadeeye ama xirfadle ay lagama maarmaan u tahay inay noqoto astaan ​​wanaagsan. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad fiiriso bogga Logo Iibso oo aad ku heli karto astaan ​​qiimo jaban.
Jawaab si aad u iibsato Logo
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida boggaga.
Ku jawaab Eloy León
Ayaa ubaahan magacyada naqshadeynta iyo ogeysiisyada si loogu qoro whatsap 3165177013 nashqadeyn qaab gaar ah?
Jawaab 2santos Dj
Calaamadda Bilaashka ah ee LACAG-LA'AAN AH BILAASH, halkan ayaan ka tijaabiyey kan keliya laakiin waxaan horeba isugu dayay 10 barnaamij oo oranaya bilaash runtiina maahan.
KANI WAA WAQTIGA WAQTIGA… anigoo og halka meeshuu oranayo bilaash ka dhigan tahay abuuritaanka astaan ​​bilaash ah laakiin inaan ku helo anigoo bixinaya waxaan maalgashan lahaa abuurista astaan ​​kaligey ah barnaamijyada nashqadeynta ama lacagta naqshad uu sameeyay qof xirfadle ah.
Haddii run ahaantii ay jiraan QAAR LACAG LA'AAN taasi maahan jacel ii soo sheeg midkee. in kastoo markaa kadib aad abuuri karto astaan ​​sawir leh ama kuwa la midka ah.
Waad mahadsantahay oo waqtigaaga ha iskaga luminin barnaamijkasta ilaa kuwa dhahayo waa u adeegay waxay dhahaan abuuraha waa kan u adeegay!
Zamora Christian dijo
On Line Logo Maker ma aha bilaash
Ku jawaab Christian Zamora
mahadsanid macluumaad wanaagsan
Macluumaad wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad bixisaa si aad u soo dejiso. Ma dhihi karo waa bilaash.
Ku jawaab Fernando Garcia
Waan ka helay sida aad wax u qortid, aad baad u mahadsan tahay, waan sii wadi doonaa aqrinta balooggaaga.
Fadlan waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawiso inaan abuuro astaan ​​loogu talagalay raadiyaha internetka ee Ecuador, mahadsanid
Ku jawaab mario bravo
Waxaan kugula talinayaa inaad wax ka bedesho qoraalkan maaddaama qaar badan oo ka mid ah bogaggan aysan bixin adeeg bilaash ah, tixgelin.
Jawaab Lester Moya
Adobe Spark waa jiilka cusub ee Photoshop